Palandöken Mutambo Inoyerera Vabati Vemitambo - RayHaber | raillynews
mushaTURKEYEastern Anatolia Region25 ErzurumPalandöken Mutambo Unoyerera kuMitambo Vanofarira
palandoken festival inokwezva vateveri vemitambo
Mutambo wePalandöken, wakarongedzwa neEzurum Metropolitan Municipality kuPalandöken Ski Center, yakazara nemafashamu nevanhu vemitambo.
Kukwirisa echando, kukwira bhasiketi, kuchera mazaya echando uye zvimwe zvinhu zvakawanda mukutarisa mutambo uyu, kusanganisira Meya weEzurum Metropolitan Municipality Mehmet Sekmen, "yakazara nezviitiko zvinoonekera zvinozadza nemutambo wevashanyi munguva yechando nemitambo yechando mumhepo," akadaro. 5-10 Kana vakataura kuti kukwikwidza kana kukwira sosi mumakomo kuchaitwa muPalandöken kusvika makore XNUMX- XNUMX apfuura, hapana angazvitenda. Nekuti kana zvasvika kuPalandöken, skiing inouya mupfungwa panguva iyoyo, Başkan akadaro Mutungamiri Sekmen.
Pal Isu takawana kuzivikanwa kwakadai uye kunaka kuPalandöken mumakore matanhatu apfuura kubvira patakatora chinzvimbo. Kana zvasvika kuPalandöken, kunyange zvitubu zve adrenaline zvakatanga kuuya mupfungwa. Nekuti takaunza chiratidzo chitsva kune chando kushanya muEzurum; Isu hatina kungogumira munguva yechando kushanya kune skiing asi zvakare takabatanidza iyo nemitambo yechando. Muchokwadi, nemasangano enyika uye epasi rese atinogadzira muEzurum, tinogadzira ziviso yePalandöken uye Erzurum. Nekuti chikuru chinhu chekushanya ndeyakanaka uye kurumbidzwa kuve kwePalandöken. Kune nharaunda muPalandöken inopa mikana yemasikirwo uye adrenaline mitambo, uye isu tinosunungura mukana uyu nekubva kwaAllah. Ndichiri kuisa chinangwa che 'mamirioni evashanyi' pamberi peEzurum; tiri kuongorora izvi zvinogona. We achifambirana mberi matanho akasimba kune chinangwa ichi. "Zvichakadaro, makomo basa, yakavakwa muna Palandöken Ski uye Turkey wokutanga kubata chando climb wall akaita kukosha panguva Ice Park.
Mitambo, adrenaline, inonakidza paColpoklus Palandoken Ski Center
Coach Sports Fest Palandoken Winter Games yakatanga
National Skier Yakaputsika PaPalandoken Ski Center
Gore Idzva reMusika Wekuenda kuPalandoken Ski Resort
Tourist Flock kuPalandoken Ski Resort
NG Afyon Nhabvu neMudhudhudhu Mutambo Unokwezva Kufarira kukuru
Bayramt Boztepe Ropeway Yakasunungurwa Nevatakuri
Bhasiketi yemitambo muPalandöken chando
Artificial ice kukwira
Nhasi Munhoroondo: 16 Ndira 1939 Istanbul Sirkeci Station